အချိန်၆လ အတွင်း ပိုက်ဆံစုပြီး ကိုယ်ပိုင်အိမ် ဝယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းကို ပြောပြလာတဲ့ အသက် ၂၀ စုံတွဲ – GuGuGarGar
အချိန်၆လ အတွင်း ပိုက်ဆံစုပြီး ကိုယ်ပိုင်အိမ် ဝယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းကို ပြောပြလာတဲ့ အသက် ၂၀ စုံတွဲ
ဒီကနေ့ခေတ် မှာ အိမ်မပြောနဲ့ မြေတောင် မပိုင်တဲ့သူတွေ အများကြီးပါ…တိုက်ခန်း ဆိုတာကလည်း တော်ရုံအခြေခံလူတန်းစားတွေ လက်လှမ်းမီတာ မဟုတ်ပါဘူး… အိမ်ခြံမြေဆိုတာကလည်း တကယ့်ကို ပိုက်ဆံတတ်နိုင်မှ ဝယ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်…ခုဖော်ပြမဲ့ စုံတွဲကတော့ မိဘတွေ ထောက်ပံ့မှုလုံးဝမပါဘဲ စုထားတဲ့ငွေလေးနဲ့ ၆ လအတွင်း အိမ်ဝယ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်….
အသက်၂၀ အရွယ် Joshua Shaw ဆိုတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ Wiktoria Zaucha ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတို့ စုံတွဲဟာ ၆ လအတွင်း ပေါင် ၁၃၀၀၀ (မြန်မာငွေ သိန်း၂၅၀ကျော်) တန်ဖိုးရှိတဲ့ ၃ ထပ်အိမ်လေးကို ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့စုံတွဲဟာ အိမ်မဝယ်နိုင်သေးခင် မိဘတွေနဲ့ ဆွေမျိုးတွေအိမ်မှာ နေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အလုပ်ကြိုးစားခဲ့ကြတာပါ….Joshua Shaw ကတော့ သာမန်ဝန်ထမ်း တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Wiktoria Zaucha ကတော့ လက်ထောက် မန်နေဂျာတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်…
ဒီလို အိမ်ဝယ်နိုင်ဖို့ အတွက် နှစ်ယောက်လုံး ပိုက်ဆံကို သေသေချာချာစုပြီး ၆ လအတွင်း တစ်ခြားစုံတွဲတွေလို ဒိတ်လုပ်တာတွေ ဈေးကြီးတာတွေ ဝယ်စားတာတွေမလုပ်ဘဲ ပိုက်ဆံကိုပဲ စုနေခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်….ဒါ့အပြင် Joshua Shaw ဟာ သူ့ရဲ့ ကားကို ရောင်းပြီး ဘတ်စ်ကား ဒါမှမဟုတ် မြေအောက်ရထားစီးပြီး အလုပ်သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်….ပိုက်ဆံကိုလည်း မလိုအပ်ဘဲ မသုံးဘဲ အိုဗာတိုင်တွေဆင်းပြီး တစ်နေ့ကို ၁၆ နာရီ အလုပ်လုပ်တယ်လို့ သိရပါတယ်….အရမ်းပင်ပန်းခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ ၆ လအတွင်း ခုလို ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးကို ဝယ်နိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ပရိသတ်ကြီးရေ..တကယ့်ကို အားကျစရာပါပဲနော်…ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ပိုက်ဆံကို မလိုအပ်ဘဲ မသုံးဘဲ စုဆောင်းထားမယ်ဆိုရင် တစ်နေ့နေ့ ကိုယ်လိုချင်တာလေးတွေကို ဝယ်ယူလာနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်… Source : Joshua Shaw
ယနခေ့တျေcမှာ အိမျမပွောနဲ့ မွတေောငျမပိုငျတဲ့သူတှေ အမြားကွီးပါ…တိုကျခနျး ဆိုတာကလညျး တျောရုံအခွခေံလူတနျးစားတှေ လကျလှမျးမီတာ မဟုတျပါဘူး… အိမျခွံမွဆေိုတာကလညျး တကယျ့ကို ပိုကျဆံတတျနိုငျမှ ဝယျနိုငျတာဖွဈပါတယျ…ခုဖျောပွမဲ့ စုံတှဲကတော့ မိဘတှေ ထောကျပံ့မှုလုံးဝမပါဘဲ စုထားတဲ့ငှလေေးနဲ့ ၆ လအတှငျး အိမျဝယျနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ….
အသကျ၂၀ အရှယျ Joshua Shaw ဆိုတဲ့ ကောငျလေးနဲ့ Wiktoria Zaucha ဆိုတဲ့ ကောငျမလေးတို့ စုံတှဲဟာ ၆ လအတှငျး ပေါငျ ၁၃၀၀၀ (မွနျမာငှေ သိနျး၂၅၀ကြျော) တနျဖိုးရှိတဲ့ ၃ ထပျအိမျလေးကို ဝယျယူနိုငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့စုံတှဲဟာ အိမျမဝယျနိုငျသေးခငျ မိဘတှနေဲ့ ဆှမြေိုးတှအေိမျမှာ နထေိုငျခဲ့တာဖွဈပွီး အလုပျကွိုးစားခဲ့ကွတာပါ….Joshua Shaw ကတော့ သာမနျဝနျထမျး တဈဦးဖွဈပွီး Wiktoria Zaucha ကတော့ လကျထောကျ မနျနဂြောတဈဦး ဖွဈပါတယျ…
ဒီလို အိမျဝယျနိုငျဖို့ အတှကျ နှဈယောကျလုံး ပိုကျဆံကို သသေခြောခြာစုပွီး ၆ လအတှငျး တဈခွားစုံတှဲတှလေို ဒိတျလုပျတာတှေ ဈေးကွီးတာတှေ ဝယျစားတာတှမေလုပျဘဲ ပိုကျဆံကိုပဲ စုနခေဲ့တာလို့ သိရပါတယျ….ဒါ့အပွငျ Joshua Shaw ဟာ သူ့ရဲ့ ကားကို ရောငျးပွီး ဘတျဈကား ဒါမှမဟုတျ မွအေောကျရထားစီးပွီး အလုပျသှားတယျလို့ ဆိုပါတယျ….ပိုကျဆံကိုလညျး မလိုအပျဘဲ မသုံးဘဲ အိုဗာတိုငျတှဆေငျးပွီး တဈနကေို့ ၁၆ နာရီ အလုပျလုပျတယျလို့ သိရပါတယျ….အရမျးပငျပနျးခဲ့ပမေယျ့ နောကျဆုံးမှာတော့ ၆ လအတှငျး ခုလို ကိုယျပိုငျအိမျလေးကို ဝယျနိုငျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ…
ပရိသတျကွီးရေ..တကယျ့ကို အားကစြရာပါပဲနျော…ပရိသတျကွီးတို့လညျး ပိုကျဆံကို မလိုအပျဘဲ မသုံးဘဲ စုဆောငျးထားမယျဆိုရငျ တဈနနေ့ေ့ ကိုယျလိုခငျြတာလေးတှကေို ဝယျယူလာနိုငျမှာပဲ ဖွဈပါတယျနျော… Source : Joshua Shaw
ဒုတိယ ဝါဆိုလ အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာ (20.7.2020)မှ (18.8.2020) အထိ